Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > The Best Places mba hankalaza ny Taom-baovao
(Last Nohavaozina: 21/02/2020)
Ny bilaogy dia mikasika ny toerana mba hankalaza ny Taom-baovao amin'ny fomba miaraka amin'ny fiaran-dalamby dia ny toerana tena Eoropa tanàna ho an'ny tsy hay hadinoina ririnina holiday. Na mitady ny tantaram-pitiavana ara-kolontsaina alina, iray miavaka afomanga na ny antoko ny taona, izahay no nanarona. Fidio ny toerana Eoropeana sy mankafy kokoa ny be tsy manam-paharoa ny Taom-baovao ve ianao noho ny teo aloha. Here is our list of top places to celebrate New Year’s – and you can reach them all by train!
New Year’s is a magical time to visit Florence, Italia. Florence Manana rivo-piainana tsy manam-paharoa nandritra izany fotoana izany ary azo idirana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Ankafizo voalamina antoko, tantaram-pitiavana fiaraha-misakafo avy, ny pyrotechnical dia mampiseho fa manintona olona an'arivony manerana Eoropa any amin'ny fanantenana mba hahatonga ny alina tsy hay hadinoina. Visitors can also go to a concert in Piazza Della Signoria or Piazza Pitti, izay mpihira malaza toy ny Alessandro Mannarino sy Irene Grandi tia hanao.
Florence no toerana tena toerana ho an'ny olona rehefa naneno tao amin'ny Taom-baovao ary indray mandeha ianao dia efa misy, ho fantatrareo ny antony.
Berlin toerana mba hankalaza ny Taom-baovao
Hifalifaly in Germany capital ho Taom-Baovao sy mankafy ny izao tontolo izao-pianarana nightlife-toerana. Berlin is a busy rail hub in northern Germany and luckily there are regular trains that run throughout the country to neighboring iraisam-pirenena tanàna.
Berlin is one of Europe’s toerana mafampana mandritra ny Taom-baovao. Ny liveliness sy ny zava-mitranga isan-karazany hariva dia tsy manan-tsahala. Fa manokana hariva, drafitra ny fety amin'ny Brandenburg vavahadin izay misy matihanina afomanga maneho. Fanampin'izany, misy matetika DJs velona sy ny sakafo mijoro ny manasongadina iraisam-pirenena nahay ny cuisinés.
Raha mitady any kokoa ny tantaram-pitiavana, avy eo Paris no toerana mandany New taona. Mandehana any amin'ny Tour Eiffel sy mijery ny fanehoan-jiro Sparkle. Tandremo sao tsy mahita ny hazavana miavaka mampiseho fa nihazakazaka avy 11:30 aho amin'ny tilikambo malaza amin'ny mozika sy ny vokatry ampy mba hanao azy ho alina, dia tsy hanadino.
Raha tianao fa handany ny hariva an-trano, boky ny sakafo hariva ho an'ny roa tao iray amin'ireo tsara indrindra Paris izay ahitana fitambaran trano fisakafoanana na tia iray amin'ireo maro velona fampisehoana fa mihazakazaka nandritra New Taona. Amin'ny fiaran-dalamby maro nanerana an'i Paris avy any Frantsa, ary koa ny alina sy fiarandalamby haingam-pandeha ny tanàn-dehibe maro samihafa, mahazo an'i Paris ho an'ny Taom-baovao i Eva dia manana Tsy mba toy izany mora.
London – Ny toerana tsara indrindra mba hankalaza ny Taom-baovao
New Year’s Eve in London is always an extraordinary experience. You will be spoilt for choice with the nahay ny zava-nitranga izay maka toerana ao Londres nandritra izany fotoana izany ny taona. Avy nijery ny afomanga mba nifety tao London mafana indrindra barany sy langilangy, misy zavatra mba hifanaraka rehetra. Na dia nitsidika ny tanàna avy akaiky na lavitra, maro ireo Eoropa fiarandalamby izay afaka hitondra anareo ho any London.
Amsterdam toerana mba hankalaza ny Taom-baovao
Amsterdam no tanàna Eoropeana iray hafa tsara ho an'ny antoko lehibe mandritra ny taona, fa raha ny amin'ny Taom-baovao i Eva, tsy misy toerana tahaka izany. Maro haingam-pandeha ao an-toerana sy lavitra fiaran-dalamby sy ny avy ao Amsterdam, Tena mora dia tanàna-dalana ho an'ny lalamby.
Asaivo ny fotoana eo amin'ny fiainanao rehefa hiaraka ny antoko ofisialy izay ranon avy teo amin'ny eny an-dalambe ao an-tanàna. Watch fireworks light up the sky throughout the evening and hit their peak at midnight to match the growing celebrations.
Barcelona – Ny iray farany ny lisitry ny toerana mba hankalaza ny Taom-baovao
Barcelona dia tanàna mahafinaritra hitsidika amin'ny fotoana rehetra ny taona fa mandritra ny Taom-baovao ny rivotra dia elektrika. Most trano fisotroana sy langilangy, ary na dia handamina ny sasany trano fisakafoanana endriky ny Taom-baovao Eva fankalazana izay matetika mihazakazaka ho ao an-Vao maraina be ny maraina. Maro ny olona ihany koa ny mifidy ny handany ny hariva amin'ny tsara tarehy amoron-dranomasina ho an'ny sasany ny fankalazana ivelan'ny trano, ny mety izay tianao ho raisina ny mahavariana firework miseho manodidina ny misasakalina. Na dia mandeha avy any Paris, Zurich na hafa firenena Eoropeana, ianao dia tsy ho niraikitra ho fitaterana toy ny misy maro fiarandalamby izay mihazakazaka ho any Barcelona.
Efa nandritra ny taona maro hafa Vaovao tanàna Eoropeana? Let us know your favorite place that you have visited during this time by tweeting us at @SaveATrain! na Mandehana any Vonjeo Lamasinina-tserasera izay hijery tsara ny exclusives rehetra manjo ary manomboka mieritreritra ny traikefa nahafinaritra manaraka!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-best-places-to-celebrate-new-years%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#NewYear'sEve Barcelona London Train Travel travelamsterdam travelberlin travelflorence travelparis